Izindaba - I-H & M yethula izixazululo zokupakisha ezizinzile
I-H & M yethula izixazululo zokupakisha ezizinzile
IH & M Group, okuyinkampani yaseSweden yezingubo ezidayisa izingubo eziningi, yethule uhlelo olusha lokufaka amaphepha olunemikhiqizo eminingi olungasetshenziswa futhi lusetshenziswe kabusha. Njengoba ukuthenga nge-inthanethi kukhula emhlabeni wonke futhi ngaleyo nsila yepulasitiki, i-H & M izwa isidingo sokuthola izixazululo zokupakisha okusimeme. Inhloso yalesi sixazululo esisha ukunciphisa ubungozi bokwenza leyo nkunkuma.
“Njengoba iBlack Week isiseduze kwethu namaholidi aseduzane, ukuthenga nge-inthanethi kufinyelele esicongweni. Futhi ngenxa yobhadane oluthathe lo nyaka, kuphephile ukusho ukuthi i-e-commerce isishintshe unomphela. Kepha ngenkathi ama-oda akwi-inthanethi ekhula njengomkhuba ojwayelekile womhlaba jikelele, injalo nemfucuza yokupakisha. Iningi lalo kube ngoplastiki ogcina ngokulahla udoti noma olwandle, okuba nomthelela omubi kakhulu emhlabeni wethu, ”kusho iH & M Group esitatimendeni.
Embonini yezemfashini, uplastiki ungenye yezinselelo ezinkulu. Ayisetshenziswanga kuphela ezintweni zokwenziwa ezifana ne-polyester, kepha nakuma-hanger, amathegi we-hang, izikhwama zokuthenga ezingasetshenziswa kanye nama-polybags. Uma kukhulunywa ngokupakisha, ipulasitiki ngokwengxenye isetshenziselwa ukuvikela eminye imikhiqizo nokuvikela udoti, okwenza kube nzima kakhulu ukufaka okunye esikhundleni sayo. Umbuzo uthi: Singakuvimbela kanjani ukupakisha ukuthi kungabi yimfucuza uqobo futhi ngesikhathi esifanayo silethe imikhiqizo esezingeni eliphakeme?
Ezikhungweni zayo zokusabalalisa eNetherlands, UK, Sweden, China, Russia nase-Australia, izigidi zamaphakeji zithunyelwe kumakhasimende njengengxenye yokuhlolwa kwezixazululo zokupakisha ezizinzile. Ishukunyiswa isu lokupakisha futhi ibe yinhlangano eyisiyingi ngokugcwele, iH & M Group isungule uhlelo lokupakisha olunemikhiqizo eminingi enezikhwama ezenziwe ngephepha eliqinisekisiwe. Uma sezivuliwe, izikhwama ziyavuselelwa.
Ngaphezu kwalokho, amalebula wokubeka uphawu manje avumela imikhiqizo yeqembu ukuthi ihambisane kakhulu nokuthumela imiyalezo, kuyilapho izikhwama zinokubukeka okuhlanzekile nokuhle. Lokhu nakho kuvimbela amaphakheji anemiyalezo ephelelwe yisikhathi kuwo, evimbela enye ingozi yemfucuza.
“Sethula uhlobo lokupakisha olungcono kumakhasimende nakwezemvelo. Kusazothuthukiswa ngoba sidinga ukuqhubeka nokusebenza ngokufaka esikhundleni sokusetshenziswa kwepulasitiki kulo lonke uhlelo lwethu lokuhlinzekwa kwempahla. Kepha ngokwethula lokhu kufakwa okusha kwemikhiqizo eminingi sakha umthelela omkhulu ngokufaka iplastiki yangaphandle ngesisombululo sephepha. Lesi isinyathelo esincane ohambweni olude, ”kusho uHanna Lumikero, ongumnikazi wezinsizakalo futhi obhekele uhlelo olusha lokupakisha eH & M Group, ekukhululweni.
Kuze kube manje, isixazululo esisha sokupakisha sethulwe kumakhasimende e-COS, ARKET, Monki kanye ne-Weekday. Umkhiqizo we-H & M uqalile ukuwusebenzisa ezimakethe ezikhethiwe, futhi lokhu kuzokwanda kuphela ezinyangeni ezizayo futhi ngalokho, kufinyelele eqenjini elikhulu kakhulu lamakhasimende emhlabeni wonke. Ekuqaleni kuka-2021, i-brand & Ezinye Izindaba zizojoyina uhambo lwethu futhi zithumele ama-oda azo online ngokufakwa kabusha kwephepha.
“Sisebenzisa imibono ebalulekile evela kumakhasimende ethu ukwenza ngcono futhi siyazi ukuthi bayajabula ngokuthola ama-oda abo emaphaketheni asimeme. Ngasikhathi sinye, sizibophezele ekwehliseni ipulasitiki kulo lonke ibhizinisi lethu nenani lamanani. Yingakho sizosebenzisa lesi sixazululo sokupakisha kuyo yonke imikhiqizo yethu, ”kusho uLumikero.
Isixazululo sokupakisha sizosiza Amaqembu e-H & M ekufinyeleleni ezinhlosweni zesu lawo eliyindilinga lokupakisha, kufaka phakathi ukunciphisa ukupakisha ngamaphesenti angama-25 nokuklama ukupakisha okungaphinde kusetshenziswe, okuvuselelekayo noma okuvuthayo ngonyaka ka-2025. Izinhloso zihambisana ne-Ellen MacArthur Foundation's New Plastics Economy Global Commitment, kanye neFactor Pact kanye ne-Canopy's pack Pack4Good, futhi kuholele ekutheni i-H & M Group isuse iningi lezikhwama zabo zokuthenga epulasitiki ezitolo zemikhiqizo, kufakwe esikhundleni sokukhetha iphepha eliqinisekisiwe . Kanye nezinye izenzo, lokhu kube nomthelela ekwehlisweni kwamaphesenti ayi-4.7 kokufakwa kwepulasitiki ngo-2019, okungaphezu kwamathani ayi-1 000 epulasitiki. Ngokusebenzisa umshayeli omusha wokupakisha, iqembu le-H & M lisondela ekufinyeleleni lezi zinhloso.